China Ubuchule obuPhezulu boQoqosho lweDiliya yerharnati yeJuice Production Line umzi-mveliso kunye nabavelisi |TSIBA
UbuGcisa obuPhezulu boQoqosho lweDiliya yomdiliya wePomegranate yoMveliso weJuice yeLine
Lo mgca ulungele iikherothi, ukulungiswa kwethanga.Iintlobo zeemveliso zokugqibela zingaba yijusi ecacileyo, ijusi enamafu, ijusi egxininisekileyo kunye neziselo ezibilisiweyo;Isenokuvelisa umgubo wethanga kunye nomgubo wekherothi.Umgca wemveliso uqukaoomatshini bokuhlamba, ii-elevators, umatshini we-blanching, umatshini wokusika, i-crusher, i-pre-heater, i-better, inzalo, umatshini wokuzalisa, iindlela ezintathu ze-evaporator ezine-evaporator kunye ne-spray drying tower, ukuzalisa kunye nomatshini wokubhala njl..Umgca wemveliso wamkela uyilo oluphambili kunye nenqanaba eliphezulu lokuzenzekelayo.Izixhobo eziphambili zenziwa ngensimbi ephezulu yensimbi kunye nokuthotyelwa ngokupheleleyo neemfuno zokucoceka kokulungiswa kokutya.
Umthamo wokuqhubekekisa :Iitoni ezi-3 ukuya kwi-1,500 yeetoni / ngosuku.
* Impahla engekasilwa:iminqathe, amathanga
* Imveliso yokugqibela:ijusi ecacileyo, ijusi enamafu, incindi yejusi kunye neziselo ezivundisiweyo
* Ukuthintela ukumdaka ngeblanching
• Ukuguga izicubu ezithambileyo ukwandisa isivuno sejusi
* Unokufumana incasa ezahlukeneyo ngokuxutywa.
* Iinxalenye zoqhagamshelwano zeNkqubo yeMaterial ziyi-304 yensimbi engenasici, ngokuthobela ngokupheleleyo ucoceko lokutya kunye neemfuno zokhuseleko.
Isisombululo se-Turnkey.Akukho mfuneko yakukhathazeka ukuba unolwazi oluncinci malunga nendlela yokwenza isityalo kwilizwe lakho. Asinikezeli izixhobo kuphela kuwe, kodwa sinikezela ngenkonzo yokumisa enye, ukusuka kwisixhobo sakho.uyilo lwendawo yokugcina impahla (amanzi, umbane, abasebenzi), uqeqesho lwabasebenzi, ukufakelwa koomatshini kunye nokulungiswa kweempazamo, inkonzo yexesha elide emva kokuthengisa njl.njl.
Iphakheji yomthi ezinzileyo ikhusela umatshini kugwayimbo kunye nomonakalo.
Ifilimu yeplastiki yamanxeba igcina umatshini ungafumi kunye nomhlwa.
Ipakethe engafakwanga fumigation inceda ukucocwa kwezithethe ezigudileyo.
Umatshini omkhulu wobungakanani uya kulungiswa kwisitya ngaphandle kwephakheji.
Ngaphambili: Umatshini wokuHlukanisa weGarlic oSebenzayo oNgenaNsimbi oNgena ntsimbi
Okulandelayo: Umatshini wokutywina weSemi-automatic weVacuum omncinci oZimamelayo wokuPakisha uVacuum
Ijusi yeGuava / iJam / iPuree Processing Plant
UbuGcisa obuPhezulu beBlueberry Wine Processing / Fr...
Umatshini wokuBilisa iYogathi eQinisekileyo iyogathi yeVendi...
Umtshini wokwenza iJusi yeKroti ezenzekelayo